बाबु मेरो पैसा खाने अमिर कान्छालाई भेटेर पैशा मागेर ल्याउनु है ! मार्मिक भिडियो – Complete Nepali News Portal
शनिबार, ०४ बैसाख २०७८
बाबु मेरो पैसा खाने अमिर कान्छालाई भेटेर पैशा मागेर ल्याउनु है ! मार्मिक भिडियो
ScotNepal January 28, 2018
अचम्म छ हाम्रो नेपालमा, बिचरा यो बुढीआमाको दुख : राजेश रुम्बा लामा को फेसबुकमा स्टाटस देख्न बित्तिकै आफुलाई रोक्न सकिन सबन्धित निकाय सम्म पुगोस भन्दै यो स्टाटस लाइ जस्ताको जस्तै हाल्न बाध्य भय :
यसरि अरुको बिषयमा मलाई बोल्न फिट्टिक्कै मन थिएन तर पनि ति अपरचित बुढी आम्मै जो भरतपुर राजस्वकार्यलाय छेउ सडकमा बेवारिसे अवस्थामा रोइरहेको आँशु सम्झें,रात पर्यो आमा अब घर जानु भनेर अटो खोजेर हातमा केहि पैशा थमाइदिँदा बाबु मेरो पैसा खाने अमिर कान्छालाई भेटेर पैशा मागेर ल्याउनु है ! भन्ने शब्दले घोचि रह्यो, र त यो फोटो र भिडियो शेर गरिदिएँ । यदि तपाई कोहि कसैले भरतपुर महानगरपालिका भोजाडको अमिर कान्छा भन्ने ब्याक्ति चिन्नु हुन्छ भने यो खबर पुर्याइदिनु होला ।
र नचिने पनि यो स्टाटस् सेर गरेर उ कहाँ पुर्याउन सह्योग गरिदिनु होला ताकि बृद्धाभत्ता नै मागेर केहि दिनमा फिर्त गरिदिन्छु भनेर बुढि आमैलाई ठग्नेको घैंटोमा घाम लागोस ।